परमेश्वरलाई कसरी प्रार्थना गर्ने | बाइबल के भन्छ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी एफिक एस्टोनियन कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
हाम्रो प्रार्थना सुन्ने कोही छ?
“हे प्रार्थना सुन्नुहुने, तपाईंकहाँनै सबै प्राणी आउनेछन्‌।”—भजन ६५:२.
थुप्रै मानिसको विचारमा परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। विशेषगरि समस्या झेलिरहेका मानिसहरू परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्‌का गर्छन्‌।
“ज-जसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्छन्‌, तिनीहरूमाथि यहोवाको नजर रहन्छ अनि तिनीहरूको उत्कट बिन्ती सुन्न उहाँले आफ्नो कान थाप्नुहुन्छ; तर ज-जसले खराब काम गर्छन्‌, तिनीहरूदेखि यहोवाले आफ्नो अनुहार फर्काउनुहुन्छ।” (१ पत्रुस ३:१२) हो, परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट हुन्छ। तर विशेषगरि आफ्नो आज्ञा मान्नेहरूको प्रार्थना सुन्न उहाँ अझै इच्छुक हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्न कत्तिको इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा बाइबल यसो भन्छ: “हामी यो कुरामा ढुक्क छौं, कि परमेश्वरको इच्छाबमोजिम हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ।” (१ यूहन्ना ५:१४) त्यसकारण परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको चाहन्छौं भने कस्तो किसिमको प्रार्थना उहाँको इच्छासित मेल खान्छ, त्यो बुझ्नु आवश्यक छ।
‘प्रार्थना गर्दा एउटै कुरा दोहोऱ्याई नराख।’—मत्ती ६:७.
बौद्ध, क्याथोलिक, हिन्दू र इस्लामजस्ता थुप्रै धर्मले माला जप्दै प्रार्थना कण्ठ गर्न, ठूलठूला स्वरमा त्यसलाई दोहोऱ्याउन र त्यसको गन्ती गर्न सिकाउँछन्‌।
हामीले मनैदेखि अनि निष्कपट भई प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना कण्ठ पार्नु वा प्रार्थनामा सधैं एउटै कुरा दोहोऱ्याइ-तेहऱ्याइ गर्नु उचित होइन। बाइबलले हामीलाई यसो गर्न आग्रह गर्छ: “प्रार्थना गर्दा अन्यजातिका मानिसहरूले जस्तै एउटै कुरा दोहोऱ्याई नराख किनभने धेरै बोल्यो भने आफ्नो सुनुवाइ हुन्छ भनी तिनीहरू सोच्छन्‌। त्यसैले तिनीहरूजस्तो नहोओ किनभने तिमीहरूले माग्नुभन्दा अघिनै तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर परमेश्वर, तिमीहरूका बुबालाई थाह छ।”—मत्ती ६:७, ८.
परमेश्वरलाई स्वीकार्य नहुने तरिकामा प्रार्थना गऱ्यौं भने हामीले व्यर्थैमा समय खेर फालिरहेका हुन्छौं अथवा परमेश्वरलाई रिस उठाइरहेका पनि हुन सक्छौं। परमेश्वरको इच्छाअनुरूप चल्न नचाहनेहरूको प्रार्थना उहाँको नजरमा “घिनलाग्दा” हुन्छन्‌ भनी बाइबलमा बताइएको छ।—हितोपदेश २८:९.
हामीले कसलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?
“जबसम्म परमप्रभुलाई पाउनसक्छ उहाँलाई खोज। उहाँ नजिक हुनुहुँदानै उहाँलाई पुकार।”—यशैया ५५:६.
केही मानिसहरू मरियमलाई प्रार्थना गर्छन्‌। अरू केही भने स्वर्गदूत र “सन्त” भनेर मानिएका व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गर्छन्‌। यी सन्तहरूमध्ये पाडुवाका एन्थोनी पनि एक हुन्‌। तिनले मानिसहरूको “आध्यात्मिक र भौतिक आवश्यकताहरूको ख्याल राख्छन्‌” भन्ने विश्वास गरिन्छ। साथै अर्का एक “सन्त” यहूदालाई “गाह्रो साह्रो अवस्थामा” मदत गर्ने सन्तको रूपमा लिइन्छ। थुप्रै मानिस आफ्नो लागि यी सन्तहरू र स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरसामु बिन्ती गरिदिनेछन्‌ भनी विश्वास गर्छन्‌ र तिनीहरूलाई प्रार्थना गर्छन्‌।
परमेश्वरका साँचो उपासकहरूले “स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा बुबा”-लाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। (मत्ती ६:९) बाइबलमा हामीलाई यस्तो आग्रह गरिएको छ: “कुनै कुराको विषयमा चिन्तित नहोओ तर हरेक कुरामा प्रार्थना, उत्कट बिन्ती र धन्यवादका साथ आफ्नो निवेदन परमेश्वरसमक्ष जाहेर गर।”—फिलिप्पी ४:६. (g14-E 09)
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रार्थना
प्रार्थनाबारे बाइबल के भन्छ?